[Review] Top 7 Serum vàng 24K dưỡng da tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 7 Serum vàng 24K dưỡng da tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 7 Serum vàng 24K dưỡng da tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Namuhla, izidingo zobuhle zabesifazane zibaluleke kakhulu kunangaphambili. Ngakho-ke, imikhiqizo yobuhle yazalwa ukuze ihlangabezane kangcono nalesi sidingo. Lapho, 24K CZK i-serum yegolide Ithathwa njengethandwa futhi yaziswa ngabesifazane abaningi ngekhono layo lobuhle. Ngakho usuzazi izinhlobo i-serum Iyiphi eshisa kakhulu njengamanje? Uma kungenjalo, sicela ubhekisele esihlokweni esilandelayo ngokushesha.
1 Iyini i-serum yegolide engu-24k?
2 Ingabe kufanele ngisebenzise i-serum yegolide engu-24k ekunakekeleni isikhumba?
3 Amaserum egolide angu-7 aphezulu adumile angu-24k
3.1 1. 24k Goldzan Gold Serum
3.2 2. I-NAVACOS 24K Gold Serum
3.3 3. I-24K Charme Gold Serum
3.4 4. Iseramu yegolide ye-YHL 24K
3.5 5. 24K Lebelage Gold Serum
3.6 6. I-Bird’s Nest 24K Gold Serum
3.7 7. I-Tonymoly 24K Gold Serum
4 Ungayisebenzisa kanjani i-24k gold essence serum
5 Amanye amanothi lapho usebenzisa i-essence yegolide engu-24k
Iyini i-serum yegolide engu-24k?
Ezikhathini zakudala, izindlovukazi zaseGibhithe zazisebenzisa i-essence yegolide engu-24K njengesithako sobuhle esimangalisayo. Kamuva, ochwepheshe baye bacwaninga ukusetshenziswa okuvelele kwalesi sici ekunakekeleni isikhumba. Ngakho bathola iresiphi yokuyenza 24k igolide serum esetshenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba.
Le serum yokunakekelwa kwesikhumba yenziwe ngezinhlayiya zegolide ezincane, ngakho ingena kalula ekujuleni kwezingqimba zesikhumba. Phakathi naleso sikhathi, igolide linamandla okumelana nama-oxidizing agents kanye nezimbangela zokuguga. Ngakho-ke, lapho i-nanoparticle ingena ekujuleni kwesikhumba, izosiza isikhumba ukuba sikhanye futhi siphile, siqede i-melanin pigment ebangela isikhumba sibe mnyama.
Ingabe kufanele ngisebenzise i-serum yegolide engu-24k ekunakekeleni isikhumba?
Lo ngumbuzo abantu abaningi abawubuzayo lapho befunda ngawo 24K CZK i-serum yegolide. Ukuze uphendule lo mbuzo, i-athikili izonikeza ukusetshenziswa okuvelele komkhiqizo ngezansi:
I-24k serum yegolide inamandla okulwa nenqubo yokuguga ngokusiza isikhumba ukwandisa i-collagen. Ngakho isikhumba sakho ngeke iqedwe ngokuphelele imibimbi, ukwandisa nokunwebeka kanye mhlophe bushelelezi.
I-Serum isiza ukulwa ne-oxidation, iqede amabala amnyama ngokushesha.
Isikhumba sakho sizonikezwa ngokugcwele imisoco edingekayo futhi sibe manzi ngokugcwele. Ngakho-ke, isikhumba sihlala sigcwele futhi sibushelelezi.
Ukusekela ekwelapheni induna, izibazi kanye nezifo zesikhumba ezivuthayo.
Umkhiqizo ulungele zonke izinhlobo zesikhumba kuhlanganisa nesikhumba esibucayi. Ngoba i-serum ayinazo izinto eziyingozi futhi iphephe kakhulu esikhumbeni sakho.
Amaserum egolide angu-7 aphezulu adumile angu-24k
Njengamanje, emakethe kunemigqa eminingi ye-serum yegolide engu-24k evela kumikhiqizo ehlukene. Ngakho-ke, indatshana izokusiza ukuthi ufunde ngamaserum angu-7 akalwe kakhulu lapha:
1. 24k Goldzan Gold Serum
24k Goldzan Gold Serum Waziwa njengomugqa womkhiqizo odumile womkhiqizo we-Skinature osuka e-Korea. Umkhiqizo okwamanje ungenye yamaserum essence egolide angu-24K athengiswa kakhulu emakethe yase-Korea nasemazweni ase-Asia, kuhlanganise ne-Vietnam.
ISerum yenziwe ngegolide elimsulwa kanye nezinye izakhamzimba ezifana ne-noni fruit extract, i-collagen entsha, i-hyaluronic acid (HA), i-Aquaxyl. Ngakho-ke, umkhiqizo uzuza ukusebenza kahle kakhulu ekunakekelweni nasekuthuthukisweni kwezinkinga zesikhumba. Ama-molecule egolide azoshukumisa isikhumba ukukhiqiza i-collagen ukuvimbela inqubo yokuguga, ukulwa nokuvuvukala nokunciphisa induna, amabala amnyama. Ngaphandle kwalokho, isikhumba sakho sizonikezwa umswakama odingekayo ngenxa yezithako ze-HA ne-Aquaxyl.
Intengo yereferensi yomkhiqizo: VND 895,000/ibhodlela lika-100ml
2. I-NAVACOS 24K Gold Serum
Okulandelayo ohlwini umkhiqizo ovela kumkhiqizo odumile waseKorea i-Navacos. I-Navacos 24K Gold Serum Icwaningwe futhi yasungulwa ngochwepheshe abaphambili. Umkhiqizo uqukethe izithako eziyinhloko ezilandelayo:
I-essence yegolide engu-24K emsulwa enosayizi omncane kakhulu. Ngakho-ke, la ma-molecule angena kalula ekujuleni kwamangqamuzana esikhumba futhi akhuthaze ukwanda kwe-collagen, avimbele ukuguga.
I-Saffron essence: isiza ukupholisa amabala abomvu esikhumbeni, i-anti-inflammatory futhi inciphise amabala amnyama, ama-freckles, ukwandisa ukunwebeka kwesikhumba.
Ikhishwe embewini kabhontshisi wesoya ovutshiwe: inikeza inani elidingekayo lomswakama esikhumbeni
Izithako ezisebenzayo i-arginine, i-Citric Acid, i-Polyglutamic Acid: isiza ukukhipha, qinisa ama-pores, isekela ukwelashwa okuphumelelayo kwezinduna.
Ngaphambi kokuba usakazwe emakethe, umkhiqizo uhloliwe futhi waboniswa ukuthi unemiphumela ephumelelayo esikhumbeni. Ngakho-ke, abathengi baqinisekiswa ngokuphelele lapho besebenzisa.
Intengo yereferensi yomkhiqizo: 590,000 VND / 30ml ibhodlela
3. I-24K Charme Gold Serum
Lona umkhiqizo ovela kumkhiqizo odumile wamakha aseKorea uCharme. 24k Charme Gold Serum uthole izitifiketi eziningi kanye nemiklomelo ekhaya naphesheya. Umkhiqizo unezithako eziningi zekhwalithi kanje:
I-essence yegolide engu-24K efomini le-nano ingena kalula ijule kumaseli esikhumba
I-collagen entsha isiza isikhumba ukuthi sivuselele, sibuyisele isikhumba esiguga, sinciphise imibimbi.
Ama-peptide asiza ukuvuselela isikhumba
I-Hyaluronic Acid (HA) inamandla okufaka amanzi esikhumbeni ngendlela efanele futhi isigcine sibushelelezi.
Ngenxa yalezi zithako ezingenhla, isikhumba sakho sizoba mhlophe, bushelelezi, sicwebezele futhi sibambezele ngempumelelo inqubo yokuguga. Uzoba nesikhumba esikhazimulayo nesibukeka sisincane ngokwedlulele kuneminyaka yakho.
4. Iseramu yegolide ye-YHL 24K
Okulandelayo umkhiqizo ovela kumkhiqizo waseKorea i-YHL. I-24K Gold Serum YHL baziswa kakhulu abesifazane ekunakekelweni kwesikhumba kanye nokuvuselelwa. Izithako ze-serum zenziwe ngokuphelele ngemvelo:
I-essence yegolide engu-24K esesimweni se-nano ingena kalula ijule kuseli ngalinye ukuze ikhiphe ngokuphelele ubuthi ne-melanin. Ngakho-ke, izinkinga zesikhumba ezifana nezinduna, amabala amnyama, imibimbi ziyaqedwa.
I-green tea extract: inezindawo zokulwa nokuvuvukala, i-antibacterial kanye ne-pore-tightening.
I-Centella asiatica extract: isiza ukuthambisa isikhumba, ukuphulukisa amanxeba nokulwa nama-oxidizing agents.
I-Purslane extract: inomphumela wokuthambisa, iqeda ukuvuvukala kwezimbotshana, igcina isikhumba sibushelelezi.
Izithako ezisebenzayo zisebenza ngokwendlela yemvelo, ngakho-ke ziphephile ngokuphelele futhi azibangeli ukucasuka kwesikhumba.
Intengo yereferensi yomkhiqizo: 420,000 VND / 30ml ibhodlela
5. 24K Lebelage Gold Serum
Lona umkhiqizo womkhiqizo wezimonyo we-Lebelage Yul odabuka e-Korea. 24K Lebelage Gold Serum Abesifazane abaningi bakhetha ukunakekela isikhumba sabo. Umkhiqizo wenziwa ngezithako eziningi zemvelo ezifana ne-24k gold essence, i-collagen, izingcaphuno zetiye eliluhlaza, i-ginseng ebomvu nezinye izithelo ezinomsoco. Ngaphandle kwalokho, i-serum iphinde yengezwe namavithamini namaprotheni ukusiza ukuthuthukisa izinkinga zesikhumba.
Ngenxa yezithako ezingenhla, umkhiqizo uletha imiphumela eminingi evelele esikhumbeni. Isikhumba sakho sizovuselelwa, sinciphise amabala amnyama, izinduna, imibimbi futhi sikhulise ukunwebeka. Ngaphandle kwalokho, inqubo yokukhiqizwa kwe-collagen iba namandla, okwenza isikhumba siphile futhi sibushelelezi.
Intengo yereferensi yomkhiqizo: 450,000 VND / 130ml ibhodlela
6. I-Bird’s Nest 24K Gold Serum
Lona umkhiqizo ovela ku-Vychi Cosmetics brand odabuka eVietnam. I-Bird’s Nest 24K Gold Serum Iyaziwa futhi yaziswa ngabathengi abaningi ngemiphumela yayo evelele. Umkhiqizo ulungiswa ngezithako eziyinhloko okuyizi:
I-essence yegolide engu-24K esesimweni se-nano inomthelela ojulile kumaseli esikhumba
I-Collagen ekhishwe ku-salmon isiza ukubuyisela ngokushesha indawo yesikhumba eyonakele, inciphise ukuwohloka kwesikhumba.
Ingqikithi yesidleke senyoni: ikhuthaza ukuvuselelwa kwesikhumba esiguga, esishiywe yizinduna futhi sibuyisela isikhumba esonakele.
I-Citric Acid: isiza ukukhipha, ukunciphisa uwoyela, nokuvula izimbotshana
I-Hyaluronic Acid (HA) inamandla okuthambisa isikhumba futhi isigcine sithambile
Isithako esisebenzayo i-PGA: ikhuthaza ukumuncwa kwezakhamzimba ezinhle esikhumbeni, igcine isikhumba simanzi.
Ngenxa yalezi zithako ezingenhla, isikhumba sakho sizogqama, sibe nempilo futhi sisize ukugcina ubusha baso.
Intengo yereferensi yomkhiqizo: 450,000 VND/50ml ibhodlela
7. I-Tonymoly 24K Gold Serum
Okokugcina ohlwini umkhiqizo ovela kumkhiqizo wezimonyo waseKorea iTonymoly. Ithebula lezithako ze I-serum yegolide ye-Tonymoly 24K Ikhishwa emvelweni ngemiphumela evelele yokunakekelwa kwesikhumba. Uzojabulela isikhumba esiminyene kakhulu nesikhanyayo.
Ukwakhiwa kwe-serum kuhlanganisa izakhi ezifana ne-24k gold essence, uketshezi lomnenke, i-mandarin peel extract, i-ginseng. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ube nenani lezithako ezisebenzayo ezifana ne-EGF, HA ezithambisa futhi zondle isikhumba. Ngenxa yezithako ezingenhla, isikhumba sizokondliwa kusukela ekujuleni, ukufiphala kwamabala amnyama futhi kuvule ithoni. Isikhumba sakho sizoba sisha, sibe nempilo futhi sikhanye.
Intengo yereferensi yomkhiqizo: 1,740,000 VND / 15ml ibhodlela
Ungayisebenzisa kanjani i-24k gold essence serum
Isetshenziswa kanjani i-24k gold essence serum iyafana namanye amaserum. Udinga ukwenza lezi zinyathelo ezilandelayo ngokulandelana:
Isinyathelo 1: Thatha izinyathelo zokuhlanza isikhumba ukuze usize i-serum ingene kalula. Okokuqala, udinga ukusebenzisa i-makeup remover ukuze ususe konke ukungcola, izinsalela zezimonyo. Bese, usebenzisa okokuhlanza okufanele isikhumba sakho sihlanzeke futhi. Sebenzisa i-exfoliator kabili ngeviki ukuze uvule izimbotshana.
Isinyathelo sesi-2: Ngemuva kokuhlanza isikhumba, uthatha ithawula elithambile likakotini ukuze usule isikhumba. Okulandelayo, pompa inani elanele le-24k gold essence serum futhi ulisebenzise ngokulinganayo esikhumbeni ungqimba oluncane.
Isinyathelo sesi-3: Sebenzisa izandla zakho ukubhucunga ubheke esikhumbeni ukuze i-serum ingene ngokujulile. Awudingi ukugeza ngamanzi.
Kufanele usebenzise i-serum yegolide engu-24k nsuku zonke ebusuku ngaphambi kokuyolala. Ngoba yilapho isikhumba sakho sihlangana kalula futhi simunca imisoco. Ngenxa yalokho, i-serum ingakwazi ukuyisebenzisa kahle kakhulu.
Amanye amanothi lapho usebenzisa i-essence yegolide engu-24k
Ukuze ukwazi ukusebenzisa i-24k gold essence serum ngempumelelo, udinga ukuqaphela izindaba ezimbalwa kanjena:
Udinga ukuqedela izinyathelo zokuhlanza isikhumba. Ngenxa yalokhu, ama-pores azovuleka futhi kulula ukumunca izakhi.
Isikhumba sakho singase singazwani nesinye sezithako ku-serum. Ngakho-ke, udinga ukufunda ngokucophelela izithako ngaphambi kokusebenzisa. Uma kukhona ukucasuka, yeka umkhiqizo ngokushesha futhi uxhumane nodokotela wesikhumba.
Udinga ukukhetha ingqikithi yegolide engu-24k, ukuqinisekiswa kwekhwalithi kubasabalalisi abahloniphekile.
Ngaphandle kokusebenzisa i-essence yegolide engu-24k, udinga ukuyihlanganisa nokudla okunengqondo nokungokwesayensi nokuzivocavoca. Kungale ndlela kuphela lapho ungakwazi ukwandisa ukumelana kwesikhumba sakho futhi ugcine izici zakho zobusha unomphela.
Nalu ulwazi oluyisisekelo mayelana 24K CZK i-serum yegolide. Umkhiqizo usuphenduke “i-panacea” ngempela ukusiza isikhumba sakho sihlale sinempilo futhi sinciphise ukuguga.
Top 5 Mascara Innisfree nào tốt nhất được yêu thích hiện nay | Muasalebang
3 cách khắc phục iPhone mất Face ID đơn giản mà không phải ai cũng biết | Muasalebang